Myanmar Movie – အနန္တတန်ခိုးရှင် ဘုရားသခင် အသင်းတော်
Tag: Myanmar Movie
အိမ်တွင်းမှ လက်ဝဲပညာပေးဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ် – ဘုရားသခင်၌ ယုံကြည်သူတို့သည် သူတို့၏ မိသားစုများကို အမှန်တကယ် ဂရုမစိုက်ဘဲနေကြပါသလား (အပိုင်း ၄/၈)
September 11, 2019 September 11, 2019 kingdomsalvationmyLeaveacomment
သခင်ယေရှုက “သင်တို့သည် လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ် ရှိသမျှသို့သွား၍၊ ဝေနေယျသတ္တဝါအပေါင်းတို့အား ဧဝံဂေလိတရားကို ဟောကြလော့။” (ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်း ၁၆း၁၅) ဟု မိန့်တော်မူခဲ့သည်။ ဧဝံဂေလိတရား ဖြန့်ဝေခြင်းနှင့် ဘုရားသခင်ကို သက်သေခံခြင်းသည် ခရစ်ယာန်များ ဆောင်ရွက်ကြသည့် နှစ်လိုဖွယ်ဖြစ်ပြီး ဖြောင့်မတ်သော လုပ်ရပ်တစ်ခု ဖြစ်သည်။သို့သော် တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီက ခရစ်ယာန်များကို ရက်ရက်စက်စက် ဖမ်းဆီးပြီး နှိပ်စက်ကြသည်။ ဤအတွက်ကြောင့် သူတို့၏ အိမ်များစွာကို ပြိုကွဲစေပြီး အချို့မှာ အိမ်များကို မပြန်နိုင်ကြတော့သလို များစွာတို့သည် အဖမ်းခံရပြီး ထောင်ချခံခဲ့ရလေသည်။ အချို့မှာ သေသည်အထိပင် နှိပ်စက်ညှင်းပန်းခံခဲ့ရသည်။ သို့သော် သူတို့၏ ဘုရားသခင်အပေါ် ယုံကြည်မှုကြောင့် သူတို့ အိမ်များ ပြိုကွဲခဲ့ရသည်ဟု စီစီပီက ဆက်လက်၍ အမှန်တရားကို လုံးဝပြောင်းလဲပစ်ခဲ့သည်။ မရေတွက်နိုင်သော ခရစ်ယာန်များ၏ အိမ်များ ဖျက်စီးခံရခြင်းတွင် အဘယ်သူသည် တကယ့်တရားခံ ဖြစ်ပါသနည်း။Read More »
September 6, 2019 September 6, 2019 kingdomsalvationmyLeaveacomment
Chinese Christian Zheng Yi and his sister have accepted God’s gospel of the last days, but they are faced with the strong obstruction and coercion of their father who isaminister atamunicipal United Front Work Department—this gives rise to an intense spiritual battle within the family. Zheng Yi and his sister use Almighty God’s words to refute the CCP government’s lies and rumors one by one, but out of angry desperation, their father heartlessly expels his son, daughter, and wife from the house in order to hold on to his own official position…. Brother and sister resolutely choose to follow Christ; they continue to spread and bear witness to God’s appearance and work in the last days.Read More »
ခရစ်ယာန်ဘာသာ ရုပ်ရှင် (ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သားများ)
July 25, 2019 July 26, 2019 kingdomsalvationmyLeaveacomment
သခင်ယေရှုက၊ “ငါအမှန်ဆိုသည်ကား၊ သင်တို့သည်ပြောင်းလဲ၍ သူငယ်ကဲ့သို့မဖြစ်လျှင် ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့ မ ရောက်ရကြ” (ရှင်မဿဲ ၁၈:၃) ဟု မိန့်တော်မူသည်။ ရိုးသားသော သူတို့သာ ကောင်းကင်နိုင်ငံထဲသို့ ဝင်ရောက်နိုင်သည်၊ ရိုးသားသော သူတို့သာ နိုင်ငံတော်၏ လူများ ဖြစ်နိုင်သည်ဟု သခင်ယေရှု မိန့်တော်မူခဲ့သည်။ ဤရုပ်ရှင်က ခရစ်ယာန်ဖြစ်သည့် ချင်နူ၏ ဘုရားနှုတ်ကပတ်တော်နှင့် ဆိုင်သော အတွေ့အကြုံ နှင့် ဘဝတွင် ရိုးသားသော လူတစ်ဦးဖြစ်လာဖို့ ရှာဖွေခြင်းဖြစ်စဉ်ကို ပြောပြပါသည်။ ချင်နူမှာ ဆရာဝန်တစ်ဦး ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်ပြီးနောက်တွင်ပင်၊ သူမ၏ နေ့စဉ်အသက်တာတွင် သူမ၏ ကိုယ်ကျိုးနှင့် ဂုဏ်ကို ထိခိုက်စေသည့် အမှုအရာများနှင့် ကြုံရချိန်တွင် သူမသည် လိမ်လည်ပြီး မလှည့်ဖြားပဲ မနေနိုင်သေးပါ။ စမ်းသပ်မှုများနှင့် ဆင်းရဲဒုက္ခများကို ကြုံဆုံရာတွင်၊သူမသည် ဘုရားသခင်နှင့် ပတ်သက်၍ အထင်အမြင် လွဲမှားမှုများနှင့် မကျေနပ်ချက်များ ဖြစ်ပေါ်သည်၊ သို့သော် တစ်ချိန်ပြီးတစ်ချိန် သမ္မတရားကို ရှာဖွေခြင်းမှတဆင့်၊ သူမ၏ မရိုးသားမှုနှင့် တကိုယ်ကောင်းဆန်မှု၊ စိတ်မချရသော ဆိုးယုတ်သည့် သဘာဝတို့၏ အရင်းအမြစ်ကို သိနားလည်မှုတစ်ခု ရရှိခဲ့သည်။ သူမ၏ လိမ်လည်တတ်မှုနှင့် သူမ၏ နှလုံးသားထဲရှိ မရိုးသားမှုကို ဖြေရှင်းရန် သမ္မာတရားကို ရှာဖွေခြင်းအား သူမ စတင် အာရုံစိုက်လာခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင်၊ သူမ၏ တာဝန်ကို ထမ်းဆောင်စဉ် တရုတ်ကွန်မြူနစ် ပါတီ အစိုးရ၏ ဖမ်းဆီးခြင်းကိုခံခဲ့ရပြီး အကြီးအကျယ် ညှင်းဆဲမှုခံရချိန်တွင်၊ သူမသည် မုသားတစ်ခုကို ပြောမည့်အစား သေဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်ခဲ့ပြီး ဘုရားသခင်ကို ပစ်ပယ်ဖို့ ငြင်းဆိုခဲ့သည်။ သူမသည် ဘုရားသခင်အတွက် နှစ်သက်ဖွယ်ဖြစ်သော၊ ထူးကဲသော သက်သေကို ခံခဲ့သည်။ ချင်နူသည် တဖြည်းဖြည်း ရိုးသားသော လူတစ်ဦးဖြစ်လာနိုင်ပြီး ဘုရားသခင်ကို အမှန်တကယ် ချစ်ကာ နာခံနိုင်လာသည်။ ဤသို့ဆိုလျင် သူမ၏ ဇာတ်လမ်းသည် အမှန်တကယ်တွင် မည်သို့နည်း။Read More »